मदनकृष्णलाई पश्चिम नेपाल घुम्न मन छ, हरिवंशलाई अफ्रिका » Etajakhabar
मदनकृष्णलाई पश्चिम नेपाल घुम्न मन छ, हरिवंशलाई अफ्रिका
काठमाडौँ । हास्यव्यंग्य कलाकारिता क्षेत्रमा मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको जोडीलाई आदर्श जोडी मानिन्छ । ३६ वर्षदेखि सँगसँगै हिंडिरहेको यो जोडीलाई नचिन्ने सायदै होलान् । यति लामो सहयात्रा गरेका उनीहरुको ट्यूनिङ कत्तिको मिल्छ त ?
पुस्तक पढ्ने बानी कत्तिको छ ? मदनकृष्णः ठिकै पढ्ने गर्छु । पत्रपत्रिका दैनिक हेर्छु । फुर्सदको समयमा प्रायः पुस्तक पढ्ने गर्छु । अहिले जीवा लामिछानेको सर्सर्ती संसार पढिरहेको छु । हरिवंशः पढ्छु । प्रायः साहित्यिक पुस्तक पढ्छु । अहिलेसम्म पढेका सबै पुस्तक राम्रा लागेको छ । पछिल्लो समयमा मदन पुरस्कार पाएको पुस्तक ‘ऐना’ असाध्यै राम्रो लाग्यो ।
फेभरेट खाना कुन हो ? मदनकृष्णः नेपाली खाना दाल, भात, तरकारी मनपर्छ । हरिवंशः साग र भात निकै मनपर्छ ।
खाना बनाउने बानी छ कि छैन ? मदनकृष्णः पहिला बनाउँथेँ । हिजोआज बनाउने जाँगर चलेको छैन । हरिवंशः बनाउँछु । श्रीमतीले खाना बनाइरहेका वेलामा सहयोग गर्छु । कहिलेकाहीँ आफैँ खाना बनाएर श्रीमतीलाई पालो दिने गर्छु ।
मनपर्ने ठाउँ कुन हो ? मदनकृष्णः नेपालको पोखरा र जोमसोम । हरिवंशः पहिलेदेखि नै काठमाडौं बसियो यही मनपर्छ ।
दिनमा सुत्ने बानी कत्तिको छ ? मदनकृष्णः सुत्ने समय नै हुँदैन । हरिवंशः कहिलेकाहीँ सुत्छु । तर, बढीमा १० मिनेट ।
रिसाउने बानी कत्तिको छ ? मदनकृष्णः रिसाउँछु । आफूले गर्न खोजेको कुनै पनि काम गर्न सकिएन भने अरूसँग होइन आफूसँगै रिसाउँछु । हरिवंशः आफूमाथि कसैले अन्याय ग¥यो भने रिसाउँछु ।
समाजमा तपाईंको स्टाटस कस्तो छ जस्तो लाग्छ ? मदनकृष्णः मदनकृष्ण भन्ने एउटा कलाकार हो । हास्यव्यंग्य क्षेत्रमा यसले धेरै काम गरेको छ । यसको अनुहार हेर्दा सोझो छ, हँसाउलाजस्तो छैन र पनि हँसाउँछ भन्छन् जस्तो लाग्छ । हरिवंशः म एउटा साधारण मान्छे हुँ । मेरो कामले गर्दा मात्र मलाई धेरैले चिनेका हुन् । सेलेब्रिटी हुँ भन्ने घमन्ड ममा छैन ।
कलाकार नभएको भए के बन्नुहुन्थ्यो होला ? मदनकृष्णः भगवान्ले काम गर्न हात–खुट्टा दिएका छन्, केही काम त गर्थें होला । यदि जागिर खाएको भए अहिले अवकाश लिन्थेँ होला । या त कलाकारै हुन्थेँ होला । हरिवंशः नजन्मेको भए के हुन्थेँ भनेजस्तै हो ।
सबैभन्दा बढी माया कसको लाग्छ ? मदनकृष्णः देश, छोराछोरी र परिवारको । हरिवंशः श्रीमती, छोराछोरीको ।
छोराछोरीले के गरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ? मदनकृष्णः असल नागरिक बने हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । हरिवंशः शिक्षित हुन् । कसैको मन नदुखाउन् । कसैलाई नठगुन् । मिहिनेती बनुन् भन्ने लाग्छ ।
तपाईंको आदर्श पात्र को हुनुहुन्छ ? मदनकृष्णः धेरै छन् । यो, ऊ भन्ने नै छैन । राम्रो काम गर्ने मेरा सबै आदर्श पात्र हुनुहुन्छ । हरिवंशः समाजका लागि उदाहरणीय काम गर्ने मेरा सबै आदर्श पात्र हुन् ।
कस्ता संगीत रुचाउनुहुन्छ ? मदनकृष्णः नारायण गोपालका गीतले धेरै छोएको छ । हरिवंशः क्लासिकल संगीत मनपर्छ ।
तपाईंको जीवनको अविस्मरणीय क्षण कुन हो ? मदनकृष्णः धेरै छन् । ०४६ मा बहुदलीय व्यवस्थाले जितेको समयलाई धेरै सम्झन्छु र अहिलेको समयलाई सम्झन्छु । हरिवंशः आफू जन्मेको क्षण सम्झन्छु ।
तपाईंलाई जान मन लागेको तर जान नभ्याएको ठाउँ कुन हो ? मदनकृष्णः धेरै छन् । तर, नेपालको पश्चिम भाग घुम्ने इच्छा छ । हरिवंशः जान मन त धेरै ठाउँमा लागेको छ । तैपनि, अफ्रिकन मुलुकमा जाने इच्छा छ, भ्याएको छैन । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
महलाई कुन कुराले मिलाएको छ ? मदनकृष्णः दुईजनाको एउटै उद्देश्यले । हरिवंशः हाम्रो इमानदारीले ।
अब के गर्ने इच्छा छ ? मदनकृष्णः अहिले गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिने इच्छा छ । हरिवंशः निरोगी हुने इच्छा छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, पौष २४, २०७३ समय: ६:५३:५५
शिल्पालाई धोका दिएका गौरबको रक्षासँग यस्तो रोमान्स (भिडियो)
प्रेम प्राप्ती मात्रै होइन त्याग पनि हो भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो सनम र उर्मिलाको यो भिडियो
आर्यन अधिकारीसँग पूर्व मिस नेपाल श्रृष्टी श्रेष्ठले अन्स्क्रिन रोमान्स गर्ने पक्का
सुष्मा कार्की हट अवतारमा यसरी खुलेपछि तस्विर बने भाइरल
दिपाश्रीको सिउँदोमा सिन्दुर भरिएको तस्विरको चौतर्फी चर्चा, कसले भर्‍यो दिपाश्रीको सिउँदोमा सिन्दुर ?
बेलायतमा यि सुन्दरीसँग रोमान्स गर्दागर्दै भेटीए प्रेमगीतका नायक प्रदिप खड्का
सलमानको ‘टाइगर जिन्दा हे’को पहिलो गीत ‘स्वाग से स्वागत’ सार्वजनिक, हट अवतारमा देखिइन् क्याट्रिना
आर्यन सिग्देलले निर्माण गर्ने फिल्म ‘कायरा’मा साम्राज्ञीले मागीन् १० लाख, बन्दैछिन् नेपालकै महंगी नायिका
चुनावको मुखैमा अस्वस्थ बनेका निधिलाई भेट्न अस्पताल पुगे प्रधानमन्त्री देउवा
रविन्द्र मिश्रको विवेकशील साझा पार्टीप्रतीको जनलहर बढ्दै
वाम गठबन्धनको प्रचारमा कलाकार बोकेर हिँडेको जिप पल्टिँदा तीनजना घाइते
माओवादी एमाले गठबन्धनमा नअटेपछि काँग्रेससँग जोडीन आएका बाबुरामले यसरी गरे काँग्रेसको प्रशंशा
किशोरीमाथि एसिड आक्रमण गरेर युवक मोटरसाइकलमा फरार